Cusboonaysiinta EBT-da Faafida - Shuraakada Oregon-Gaajo-La'aanta
Cusboonaysiinta EBT ee Faafa
by Fatima Jawaid iyo Chloe Eberhardt
Waxaan rabnay inaan bixinno war cusub oo ku saabsan labadaba Faafa EBT iyo Faafida Xagaaga EBT.
All P-EBT Faa'iidooyinka Oktoobar 2020 ilaa Maajo 2021 ayaa loo kala firdhiyey qoysaska xaqa u leh. Marka loo eego Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon iyo Waaxda Waxbarashada Oregon, kuwaas oo maamula Oregon's P-EBT faa'iidooyinka, dhammaan faa'iidooyinka muuqda waxaa loo kala firdhiyey dhammaadka Sebtembar qoysaska xaqa u leh.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, waxaa jiray dib u dhac lacageed oo saameeyay qoysaska qaar, laakiin markan inta badan hagaajinta waa la xaliyay. Waxaad wax badan ka baran kartaa P-EBT Arrimaha la yaqaan iyo Hagaajinta halkan. Haddii aad u malaynayso in qoyska uu weli saamaynayo arrin la og yahay ama ayan helin waxtarrada laakiin ay u qalmeen fadlan la xidhiidh Faafida EBT khadka telefoonka. Macluumaadka xiriirka ayaa ku taxan hoos. Xilliga kama dambaysta ah ee kala firdhinta dheefaha sannad dugsiyeedka 2020-21 waa Noofambar 30-keeda, markaa fadlan qoysasku ha la socdaan sida ugu dhakhsaha badan.
Oregon waxaa loo ogolaaday inay bixiso Faafida xagaaga EBT dheefaha Juun ilaa Ogosto 2021. Qoysaska xaqa u leh waxay heli doonaan xagaaga buuxa P-EBT Ilmo kasta oo xaqa u leh oo dhan $389 oo loo qaybiyay laba lacagood. Bixinta ugu horreysa ee $129 waxay dhacday Oktoobar 1; iyo bixinta labaad ee $260 waxay ahayd mid isdaba joog ah Oktoobar 22-30, 2021.
Carruurta buuxisa shuruudaha u-qalmitaanka ee soo socda ayaa si toos ah loo soo saari doonaa xagaaga P-EBT faa'iidooyinka. Xagaaga P-EBT waa kordhinta a P-EBT sanad dugsiyeedka 2020-2021:
Ardayda helay P-EBT faa'iidooyinka sanad dugsiyeedka 2020-21.
Carruurta da'doodu tahay 6 sano iyo ka yar kuwaas oo qayb ka ah kiiska SNAP wakhti kasta inta u dhaxaysa Juun 1, 2021 iyo Sebtember 4, 2021
Ardayda soo codsatay Xagaaga P-EBT inta u dhaxaysa Juun 1, 2021 iyo Sebtembar 4, 2021
Haddii aad qabtid su'aalo ama arrimo faa'iido, wac khadka tooska ah (503) 945-6481 ama iimayl u dir EBT[emailka waa la ilaaliyay]ama.innaga.
Xagga Faafada EBT faa'iidooyinka sanad dugsiyeedka 2021-22: USDA waxay ogolaatay suurtogalnimada 2021-22 P-EBT, wax badan oo soo socda oo ku saabsan waxa suurtagal u noqon kara Oregon.
Waxaan shaqaaleysiinaynaa Qabanqaabiyaha Bulshada!
Kordhinta Joogtada ah ee Faa'iidooyinka SNAP Laga bilaabo Oktoobar
Iiddii Ayaa Dooratay Lamaane Cusub Oo Samofal Ah Sanadkan
Ku soo noqo Blog-ga ugu muhiimsan